Antomotra ny Fifidianana ao Mali, Maivana ny Tombana Ho An’ny Fepotoam-piasàna Voalohany Nitondràn’i Ibrahim Boubacar Keïta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2018 18:45 GMT
Iray volana latsaka mialoha ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana izay ho filoha maliàna, ivon'ny fifanakalozan-dresaky ny rehetra ny fanombanana izay zavabitan'i Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). Raha ny eken'ny rehetra, tsy nahavita nanatanteraka ny fampanantenana nataony hisian'ny fampihavanana amin'ny faritra avaratr'i Mali sy ny fanafoanana ny kolikoly ny filoha hodimbiasan-toerana.
« Vantany vao voafidy, kolikoly: tsy hisy fandeferana mihitsy. Tsy misy ho ambonin'ny lalàna ». Notononina nandritra ny fampielezankevitra farany tamin'ny fifidianana ny ho filoha io tamin'ny 2013. Amin'izao maha-antomotra ny fifidianana amin'ny 29 Jolay 2018 izao, miasa mamely an'i Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) io fanambaràna nataony io ankehitriny. Mpifaninana roa no sisa tavela hifaninana amin'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana. Satria hatramin'ny nahalany azy ho filohan'i Mali, nirarak'ompana ny fiampangana an'i IBK ho nanodinkodina volam-bahoaka, izay ankehitriny manaratsy ny fanombànana ny dimy taona nitondràny. Ary ny antony, tao anatin'ny fepotoana dimy taona, ny filoham-panjakana maliàna dia voarohirohy taminà raharaham-bola maro voahodinkodina na tsy hita nanjavonana, taminà fanaovana lazambidy tafahoatra tamin'ireo tsenam-panjakàna sy fifangaroan-tombontsoa hafa.
Nanomboka tamin'ny 2014, taorian'ny fividianana fiaramanidina iray nosandaina 30 tapitrisa Euro ho fampiasan'ny filohampirenena, sy ny nanaovan'ny minisitry ny fiarovana sonia ny fifanarahana iray momba ny fampitaovana, nitentina 105 tapitrisa Euro, dia nangatahan'ny Tahirimbola Iraisampirenena (FMI) tamin'i Bouaré Fily Sissoko, minisitry fahiny nitantana ny toekarena sy ny tetibola ny momba ny fandehan'ny fitantanana. Tsy nisy nanaovana tolobidy izy ireny. Noho ny ahiahiny mikasika ny fisian'ny fanaovana lazambidy tafahoatra, natsahatr'ilay sampana iraisampirenena nandritra ny volana maro ny fandrotsahana fanampiana ara-bola ho an'i Mali. Anisan'ireo tantara ratsy hafa momba ny fandaniana ny volam-bahoaka mampiahiahy nanamarika ny dimy aona nitondràn'i IBK – toy ny nividianana ireo zezika lany andro, traktera tamin'ny vidiny nihoam-pampana na fanomezana ireo trano fonenana ho an'olona tsy tokony hisitraka izany – betsaka tamin'ireo mpikambana fahiny sy amin'izao fotoana izao ao amin'ny governemanta – ao anatin'izany ny praiminisitra Soumeylou Boubèye Maïga – no tsy maintsy mitondra fanazavana momba ny fanjavonan'ny 153 lavitrisa FCFA (230 tapitrisa euros) tao anatin'ny tetibolam-panjakana teo anelanelan'ny 2013 sy 2014, sy ny fanaovana tantely afa-drakotra ny vola maherin'ny 28 lavitrisa FCFA (40 tapitrisa euros) nividianana fiaramanidina sy fitaovana ho an'ny tafika. Nisy fitarainana voapetraka tamin'ny 18 Mai teo, avy amin'ny BIPREM (Bloc d’intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali).
hoy ny alahelon'i Soumaïla Cissé, filohan'ny URD (Union pour la république et la démocratie) sady kandidà ho amin'ny fifidianana ho filohampirenena natolotry ny fiarahamientan'ireo mpanohitra. Ny sasany tafapetraka aminà toerana mbola manankaja kokoa aza, roa no lasa teo amin'ny sehatra iraisampirenena. Raha fehezina, navoaka tamin'ny varavarana iray izy rehetra ary avy eo nampidirina taminà varavarana iray hafa. » Tsy ilay kandidà nampalahelo tsy lany tamin'ny fihodinana farany tamin'ireo latsabato natao tamin'ny 2002 sy 2013 ihany no niampanga ny fandaniambola be nataon'i IBK nambotriany ny vahoakany. Toa azy, ilay maliàna mpanohitra iray hafa, Tiébilé Dramé, dia miampanga ny filohampirenena ho nanao tantely afa-drakotra ny volam-bahoaka taminà fividianana fitaovana ho an'ny tafika, izay tsy nahafahana akory nampihena ny herisetra nataon'ireo djihadista tany avaratry ny firenena.
hoy ny nanipihan'ilay minisitra fahiny, Tiébilé Dramé, sy ny filoha ankehitriny mitantana ny PARENA (Parti pour la renaissance nationale), momba ireo 1 230 lavitrisa FCFA (1,875 tapitrisa euros) natokan'ilay lalàna fandrafetana paikady miaramila isaky ny dimy taona nolaniana tamin'ny 2015. Ary nampahatsiahivin'i Tiébilé Dramé momba ireo fividianana hafa mampiahiahy nataon'ny fanjakana Maliàna, ny an'ireo fiaramanidina mpiady niisa enina novidiana taminà orinasa breziliàna, izay tsy naharaisana afa-tsy efatra monja; sy ny an'ireo angidimby roa, izay naloa tolobotsotra ny iray. Fiampangana vao mainka mampiahiahy satria hatry ny ela ny IBK no nikolokolo fifandraisana tamin'ilay frantsay mpanao afera mampiahiahy, i Michel Tomi, nambaran'ilay mpanao gazety Frédèric Ploquin ho « amperoran'ny frantsafrika ». Ilay antsoin'ireo « manampahefana faratampony ao amin'ny fanjakana » hoe « patirao », ary anton'ny fanadihadiana marobe ataon'ny polisy, nitàna ny toeran'ny mpanelanelana taminà fifanarahana marobe nifanaovana tamin'i Mali. Mbola manampy kokoa ny fanjavozavoan'ny hetsika ataon'ny filoha maliàna ireo fifandraisana « ara-pirahalahiana» niarahan'i IBK tamin'i Michel Tomi, kanefa ireo teo ambany fifehezany mbola mitohy matahotra ny amin'ny ain-dry zareo, noho ny tsy nahavitàna namerina tanteraka ny fifehezana ny faritry ny firenena. Na teo aza ny fitsabahan'i Frantsa tamin'ny Janoary 2013 sy ny fanaovana sonia ny fifanarahana fandriampahalemana tamin'ny 2015, mbola betsaka ireo faritra any avaratry ny firenena no eo ambany fifehezana manontolon'ireo mpanao asa fampihorohoroana.